China Welded Wire Mesh fekitari uye bhizimisi | Ansheng
Welded waya pajira riya chakagadzirwa yepamusoro yakaderera-kabhoni simbi waya, kupatsanurwa ne otomatiki nemazvo uye echokwadi mechina michina gwapa kutsemura, uye ipapo electro kwakakurudzira inopisa-vakanyika kwakakurudzira, PVC uye dzimwe pamusoro kurapwa passivation uye plasticization.
Zvinhu: Yakadzika kabhoni simbi waya, isina simbi waya, nezvimwe.
Mhando: kwakakurudzira welded waya pajira riya, PVC welded waya pajira riya, welded pajira riya Panel, Stainless simbi welded waya pajira riya, etc.
Kucheka uye hunhu: kwakakurudzira usati waruka, kwakakurudzira mushure kuruka. Iine hunhu hweakasimba anti-ngura, anti-oxidation, anti-zuva, mamiriro ekunze kusagadzikana, yakasimba nzvimbo dhizaini, yekukurumidza kugadzira, yakanaka uye inoshanda, uye nyore kutakura.
Kushanda: Kune akawanda marudzi eakasungwa waya mesh, ayo anoshandiswa zvakanyanya.
1. Inogona kushandiswa muindasitiri, kutakurwa kwekurima uye nezvimwewo zvigadzirwa zvemumvura, aquaculture, nezvimwe.
2.Inogona kushandiswa seruva reruzhowa, aisle fenzi, pamwe neimba hofisi fenzi uye kushongedza.
3.Iyo indasitiri yekuvaka inowanzo shandisa waya yakasungwa mesh yekunze yekumusoro kwemadziro uye kusimbisa.
4. Welded waya pajira riya inogona kushandiswa muzvitoro, masupamaketi masherufu, zviratidziro, nezvimwe.
Kurongedza: kazhinji hunyoro-humbowo bepa (iwo ruvara rwacho rwanyanya kure-chena, yero, uye chiratidzo, chiziviso, nezvimwewo), 0.3-0.6mm epamba diki waya dhayamita yakasungwa waya mesh, nekuti waya iri yakapfava, uyezve idiki rwakapetwa, vatengi vanowanzo kumbira Bundled uye bhegi kudzivirira kukwenya kunokonzerwa nekutakura.
Pashure: Yakawedzerwa Metal Wire Mesh
Zvadaro: Epoxy Coated Wire Mesh
Isu tinogadzira Nickel Mesh, Nickel Wire Mesh, Nickel Yakawedzerwa Simbi uye Nickel Mesh Electrode yeBattery. Izvi zvigadzirwa zvakagadzirwa zvemhando yepamusoro, yakachena kuchena nickel zvinhu. Isu tinogadzira izvi zvigadzirwa zvinotevera zveindasitiri zvinyatso. Nickel Mesh inogona kugoverwa mumhando mbiri: Nickel waya wepasi (nickel waya jira) uye nickel yakawedzerwa simbi. Nickel waya meshes dzinonyanya kushandiswa sefaera midhiya uye mafuta sero electrode. Izvo zvakarukwa neyemhando yepamusoro nickel waya (kuchena> 99.5 kana pu ...
Chinokosha Zita: Epoxy yakavharwa waya mambure uye akasiyana waya mesh Chinyorwa: Yakagadzirwa yepamusoro simbi simbi waya, isina simbi waya, aruminiyamu chiwanikwa waya, epoxy yakavharwa mushure mekuruka pachena. Mavara akasiyana siyana esarudzo yako. Zvimiro: Kurema kwechiedza, kwakanaka kuchinjika, yakanaka ngura kuramba uye kufefetedza, nyore kuchenesa, yakanaka inopenya uye inoshamwaridzana nharaunda. Munda weKushandisa: Uku kutsanangurwa kunoshanda kune epoxy yakavharwa waya pajira riya (rudzi rweMachira; pachena kuruka) ye manufacturng pleated firita e ...